LF-1 Limitless concept ကို ၂၀၁၈ Motor Show မှာပြသမယ့် Lexus! – AutoMyanmar
LF-1 Limitless concept ကို ၂၀၁၈ Motor Show မှာပြသမယ့် Lexus!
Lexus company အနေနဲ့ LF-1 Limitless concept ကို ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီလထဲမှာကျင်းပမယ့် motor show မှာပါဝင်မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့ကဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Lf-1 Limitless ရဲ့ LF က “Lexus Future” လို့ဆိုလိုတာပါ။ အဲ့ဒီ Concept မှာတော့ Next generation luxury crossover ကားတွေကိုပြသသွားမှာပါ။ Concept ရဲ့ ဒီဇိုင်းအပိုင်းကိုတော့ Calty Design studio ကတာဝန်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Calty Design ဟာ Toyota ရဲ့ ဒီဇိုင်း studio ဖြစ်ပြီး ကယ်လီဖိုးနီးယားနိုင်ငံတောင်ဘက် မှာတည်ရှိပါတယ်။
Lexus ရဲ့ LF-1 Limitless concept ကိုပြသမှာကတော့ ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့် 2018 North American International Auto Show (Detroit Motor Show) မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Detroit Motor Show အကြောင်းကို အောက်ပါ လင့်ကနေဝင်ရောက်စူးစမ်းနိုင်ပါတယ်။
Detroit Motor Show(Automyanmar)
A crossover with no limits: New Lexus Concept to debut in Detroit.https://t.co/vyebcHVeyn #Detroit #Lexus #Concept pic.twitter.com/nilCtN4n6T
— Lexus Woodford (@Lexus_Woodford) December 6, 2017
Lexus, Motor Show and Event, Toyota